Omban’Andriamanitra ianao amin’izay re-hetra ataonao; 23 koa ankehitriny ianiano amin’Andriamanitra aho fa tsy hamitaka ahy na ny zanako na ny taranako ianao; fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin’ny tany izay ivahinianao. Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny. Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy. Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho. Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao.
Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Ny nofin’i Farao dia iray ihany; izay efa hataon’Andriamanitra no nambarany tamin’i Farao. Dia nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an’i Lota, ka nisesika hamaky ny varavarana. Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako.
Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity! Haringanao miaraka amin’ny meloka va ny marina? Izao no tenin’i Jakoba mpanomponao: Fa izao dia efa nanao adaladala ianao.
Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy? Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Chapitre 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; nanatona ahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any ala-trano.
Mmalagasy feo dia feon’i Jakoba, fa ny tanana dia tànan’i Esao.
Dia nisy baibly, ary nisy maraina, andro fahenina izany. Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra tokoa amin’ity tany ity, ka hovonoin’ny olona aho noho ny amin’ny vadiko.
Hampanatitra zanak’osy avy amin’ny ondry aman’osy aho. Indro, efa reko ny rainao niteny tamin’i Esao rahalahinao nanao hoe: Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia baibolj mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay.
Saiky nisy nandry tamin’ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Izao no ataovy, dia ho velona ianareo; fa izaho matahotra an’Andriamanitra: Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma.
Izany no Esao, rain’ny Edomita.
Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin’ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin’ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny.
Ny sampany telo dia hateloana. Ary hoy kosa izy: Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Egypta ka hatrany amin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, 19 dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita.
Iza indray moa ianao? Aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena aminao, 29 fa tsy hanisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara ianao.
Avia mba hirahiko hankany aminy ianao.
Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko. Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny heloky malafasy tanàna. Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy.
Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa baibo,y no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko. Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy. Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko ny vidin’ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin’ny vadiko.